Rehefa mpangalatra akoho dia malaky aseho ny sary, na takonana aza ny masony, fa rehefa mpanondrana volamena, mpanondrana sokatra, mpividy taolam-paty, mpampanofa basy kalaky, dia lasa tsy fantatra tampoka teo na ny anarany aza, nefa dia olona miondrana amin'ny fiaramanidina be izao. Kay moa efa nisokatra ny sisintany mandeha any Afrika atsimo? Dia lazaina fa reseau henjana be ilay ao ambadika, ka maninona no tsy gadraina aby ny nanome alalana izany fiaramanidina hivoaka eto an-toerana izany, ireo douanier sy zandary ary police de la frontière. Miandry anarana izahay. Efa eto ihany, mba tenenonareo ao amin'ny présidence ireny olona milaza fa avy amin'ny présidence dia tsy savaina eny Ivato ireny, toa misy mpitandro filaminana manaraka manao escorte mihitsy aza, milanja sakosy mavesatra mandeha fiaramanidina manokana, mety mpisoloky izy ireny fa mailo nareo ao. Tafandria mandry e.Patrick
Filozofika aloha ny Oniversité fa tsy trano, rindrina, sy table banc na bourse. Ny oniversité dia toerana handrafetana ny foto-pisainana sy fikarohana tsy misy fetra, ka manaja ny etika sy ny mahaolona, ny fahamarinana ary ny fanajana lalàna. Toerana itoeran'ny fahalalahan-tsaina. Izay no ilazana azy hoe Univers. Ary izay no mahatonga ny toerana arovana tsy hidiran'ny mpitandro filaminana na hery famoretana. Arovana izay fahalalana ara-tsaina tsy misy fetra izay. Izay no mampisy ny hoe Anjerimanontolo. Foto-pisainana aloha izany ny Oniversité vao trano sy bourse.Misy fiantsoana ireo sampana ao anatiny hoe "Faculté", izay midika hoe " Fahafaha-manao, fahaiza-manao". Ny zavatra rehetra atao eny amin'ny Oniversité izany dia tokony hifanentana amin'izay toe-tsaina mifototra amin'ny fahatsarana sy fahamarinana ary fanarahan-dalàna sy fenitra izay avokoa.
dimanche, 03 janvier 2021 21:33
Mahavidy V8 fa tsy mahavidy fiara pompier
8000 euro dia efa mahazo fiara pompier iray efa niasa 30 000km, fa rehefa hividy fiara V8 isaky ny ministera dia mahavidy 30 000euro ny iray. Amidio any daholo ireo V8 sy 4x4 ireo, samy omeo karama tsara mifanentana amin'ny andraikiny ireo minisitra sy directeur, tsy mila omena garde corps na mpiasa an-trano na mpamily izany, fa samy mamelona ny tenany. Tafandria mandryPatrick (Jereo Sary Tohiny)
Sarotra be ve ny manakatra hoe, rehefa tsy mamboly, na tsy mamokatra ianao dia tsy mihoty sy tsy mihinana? Ny Firenena tsy mamokatra izany, dia aza manantena ny hihoty sy hihinana, fa any lalana dia ny mangataka sy mitrosa. Tafandria mandry.Patrick
Sakeli-dalana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fandalovan'ny Covid-19 nandritra ny 9 volana tamin'ny taona 2020, ary mbola mety hitohy izany amin'ity taona ity raha ireo firenen-dehibe hafa no jerena. Samy nandray fepetra entitra ara-toekarena ny firenena maro, nanova ny paikady avokoa ireo mpahay toe-karena sy mpitondra maro maneran-tany. I Madagasikara kosa, toa ny mahazatra ny mpitondra dia nisitrika tanaty fiherena ihany niandry ny fandalovan'ny rivodozan'aretina Covid-19, ka rehefa nahatsiaro fa afa-doza dia nivoaka ny trano ka nanohy ny fiainana an-davan'andro ihany. Mitoy ny kabary fampanantenana, ny fanarenana ny fotodrafitrasa maventy sy tsy mbola natao nandritra ny 60 taona no himasoana, fa tsy misy fepetra miavaka. Azo antoka fa fitrosana sy fitadiavana famatsiana avy any ivelany, ary fiaraha-miasa fanjakana - tsy miankina na ny 3P (Partenariat Public privé), satria dia tsy hita any anaty sora-bolan'ny tetibolam-panjakana vao nolaniana ho an'ny taona 2021 izany nouvelle ville, na Tanamasoandro izany, ny tramway sy téléphérique atao eto Antananarivo, ny fanombohana ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina.
Pilo kely : Tsy mety atakaloko vadiko anao ein - Moan, tsy misy andra agnariako anao cherie ko ôoo, je t'aime mon amour- Tsy fagnahy atao tsara fa je t'aime-ko, je t'aime-ko nino? Bonne année andreh einPatrick
Pilo kely : Ron-gisa no nandrasana, ka ron-dasopy aloha no nidirana Tonga ihany ny fetin'ny faran'ny taona, tsy nety tonga ilay Kaly Tsinjo nampanantenain'ny Filoha hotsinjaraina isam-pokontany manerana ny nosy amin'ny vidiny 100ariary. Mba ron-gisa hozy ny sasany no ho avy amin'izao fety izao, kay na voam-bary iray aza tsy nisy, ary milaza ny tsy mahalala izany ireo sefo fokontany. ... Dia mbola miafy amin'ny lasopy patte sy ron'akoho 200Ar izany aloha, izay mbola afaka mividy izany, fa miaritra kely fa efa ho avy izy io hozy Rasazy. Tafandria mandry ePatrick (Jereo Sary Tohiny)
Pilo kely : Mangarahara takon'ila Teo aloha dia anisan'ny nosoratana tamin'ny takelaka fanaovana asam-panjakana ny :- Asa atao- Tompon'ny asa- Ny orinasa manatontosa ny asa- Ny orinasa mpanara-maso ny asa- Ny daty fanombohana sy fahavitan'ny asa (fepotoana)- Ary ny teti-bidy anaovana ilay asa, sy ny namatsy ara-bola.
Pilo kely : Daty roa no tandremo adino amin'ny vehivavy - Daty nahaterahany, idiran'andra anao raha adinonao bon anniv madamo- Daty niarahanareo voalohany na daty mariazy, efa adinonao sahady moa fiarahantsika Samia mamisavisa Tafandria mandryPatrick
Pilo kely : Ahoana moa no Ranavalona III nanangan-tsaina fotsy no indraindraina ho fiandrianam-pirenena? izy sy ireo tandapa aza navelan'ny Frantsay nipetraka tao an-dapa ihany, rehefa niotakotaka ny Menalamba sy ireo nanohitra ny Frantsay vao nentina tatsy La Réunion izy, ary napetraka tanaty villa tany Alger niaraka tamin'ny fianakaviany hatramin'ny mpiasany. Nomen'i Frantsay famatsiam-bola manokana i Mpanjakavavy sy ny fianakaviany nahafahany nanana fari-piainana ambony, afaka nitsidika an'i Paris aza izy sy ny fianakaviany ary ireo mpiasany, ary naverina taty Madagasikara ny razana rehefa matin'ny aretina izy. Tafandria mandry ePatrick